Dhatabhesi SeSevhisi (DaaS)
China, May 27, 2010 Chitatu, November 5, 2014 Douglas Karr
Mavhiki mashoma apfuura, ndakave nemufaro wekuteerera kuna ExactTarget Chief weMabasa, Scott McCorkle, kutaura nekushanduka kwepuratifomu yavo. Ini ndakanyora munguva yakapfuura iyo yandinotenda Email Vashandi veVashandi vakasvetuka iyo shark - uye zvinoita sekumberi-kufunga ESPs vakatotora mucherechedzo.
Scott akataura nechinangwa chaExpactTarget chekuve iye Kushambadzira Hub kumakambani. Panzvimbo pekungove iri kutumira injini yeemail, ExactTarget irikusundidzira kuve dhatabhesi rekodhi kune vazhinji vevatengi vayo nezvinangwa zvinotevera:
Dhata Kuunganidzwa uye Kugoneka - kuburikidza neiyo yakazara API, yakasimba dhata yekuwedzera uye yakachengeteka, yakasimba zvivakwa, zvinoita ikozvino kumakambani kuitisa uye kushandisa ExactTarget seyakachengeteka, inoenderana sosi yekuchengetedza yavo vatengi data.
Mitemo yeKukosha - nekuti ExactTarget inosvitsa mameseji kuburikidza neemail, izwi, SMS uye midhiya enhau, maitiro ehunhu anogona kutorwa, kuchengetwa uye kushandiswa kugadzirisa kukosha kwemeseji kune avo vatengi.
Kununurwa kweKutaurirana - ExactTarget ine inokurumidza kubuda mail manejimendi masisitimu muindasitiri uye yavo OEM modhi iri kuputika nekuda kwekuita kwesisitimu. Yakawedzerwa kune izvi Izwi, SMS uye, mushure mekutengwa kweCoTweet, pamwe mameseji enhau.
Kuyera Pazvose - ExactTarget iri kutsvaga kupedzisa denderedzwa nekupa kuyerwa kwakasimba pamusoro pekutaurirana kwese kunobuda.
Kuchengeta dhata kwaionekwa zvakanyanya kunge zvakasikwa kuSoftware seSevhisi Vatengi Ukama Management (CRM) masevhisi, asi mamwe maindasitiri ave kufamba munzira ino. Anopa Analytics, Webtrends, atangisa yavo Mushanyi Data Mart, ichibvumira kudhonza zvine simba uye kudonhedza chikamu chakavakirwa zvakananga muchigadzirwa. Webtrends ine yepamusoro REST API uye, pamwe chete neinotungamira injini yeAnalytics, kutora dhatabhesi yako yevatengi neWebtrends kunopa vashambadzi vane hunyanzvi nemidziyo ine simba yekutarisa nekuyera kutaurirana.
Dhatabhesi seSevhisi yakatangwa makore mashoma apfuura nevapi vepaAmazon neGoogle vachipa akareruka ehukama dhatabhesi akagashirwa mugore. Izvo zvese zvakanaka uye zvakanaka, asi pasina maapplication ekuwedzera iyo data, iyo indasitiri haina kunyatso kuve nekugamuchirwa kwakawanda senge vanhu vakafunga kuti zvaizoita. Mukana une makambani senge ExactTarget uye Webtrends ndeyekuti vakaratidza kutaurirana uye analytics zvigadzirwa zvatove panzvimbo pamusoro iyo DaaS.
Kunyangwe vese vatapi ava vaine kubatana kwakasimba mumwe nemumwe, zvinoita sekunge vachiwedzera ivo vari kuzokwikwidza kuve iyo yekutanga sosi yevatengi data. Ecommerce, CRM, Email uye Analytics vanopa vese vari kuzove vachimanikidza kuve dhatabhesi rekodhi uye vese vachakurumidza kunge vachipa masevhisi ekuchengetedza data rako, vape meseji yakasimba uye analytics ye data rako. Iye muridzi wedata muridzi wemutengi - saka SaaS vanopa vachimanikidza kuve Dhatabhesi sevapi veSevhisi iri kuzoputika mugore rinotevera. Iri zano rakanakira SaaS vanopa kubva kutama kana kusiya mupi wako kunonyanya kuoma kana vachingobata dhatabhesi rako!
Tags: chiroveraWakawanagoogle pamwe nebhejimabhuku ekushambadzirapew kutsvagisaTsvaga KutengesaZvekutaura ZvemagariroWisdomtiawpengine
Haptic Mhinduro: Iyo Shanduko yeTouchscreens